Ukuhluleka kweHormon: iimpawu, iziphumo, izizathu, unyango
Ngelishwa, ukuhluleka kwe-hormone kuqhelekileyo. Kulo lonke ibhinqa kubalulekile ukugcina ibhalansi ye-hormone ngokuqhelekileyo. Ukuba kukho into ephukile emzimbeni, ngoko umfazi akakwazi ukukhulelwa, kwaye ukuba kwenzeka ummangaliso, kukho ukungahambi kakuhle. Ngoko ke, ngaphambi kokucwangcisa umntwana, kufuneka uqinisekise ukuba yonke into ihambelana nezinga lakho le-hormone.
Iprogesterone kunye ne-estrogen yi-hormone yabesifazane abalawula iinkqubo kumzimba wesetyhini.
Ukukhubazeka kweHormon kubangelwa ukunyuka kwemveliso yehommoni okanye ngokuphambene nokusabalala kwezifo ezithathelwanayo. Izifo ezibangelwa yiHormonal zingenzeka ngezizathu ezininzi, kubandakanywa nezifo zenkqubo yokuzala.
Xa ukhulelwe, izinga le-hormonal emzimbeni litshintshiwe. Ihomoni ye-hormonone ye-gonadotropin i-hormone ivela, eyenza i-chorion emzimbeni wowesifazane kuphela xa ithwala umntwana. Kodwa imvelaphi ye-hormone ayitshintshi nje kuphela ngenxa ye-hormone entsha, kodwa ngenxa yokuba i-estrogen kunye neprogesterone iyakhiwa. Yaye xa iqela liye lazala, i-hormone entsha iveliswa, elawula ukubonakala kobisi lwebele.
Iimpawu zokungaphumeleli kwe-hormone kubasetyhini
Ukuphululwa kwexesha lokunyuka (incinci okanye iphantsi kwenyanga, ukulibaziseka rhoqo, ukunyamezela okukhulu, njl.):
Ukubonakala kweenwele ezongezelelweyo emzimbeni;
Ukutshatyalaliswa nokudandatheka okuqhubekayo;
Izifo zengxube zobisi;
Ukuziphatha kwezesondo eziphantsi;
Ukuba ngokukhawuleza umfazi uyazibona iimpawu ezithile, ngoko kuyimfuneko ukuya kumgqirha-gynecologist ukwenzela ukuba uncede ukuzisa imvelaphi ye-hormonal ngokulandelelana. Ngexesha elifanayo kufuneka uphuze iimfucu zamanzi, utshintshe ukutya kwakho, udle izithelo kunye nemifuno. Ngokufanayo, unyango olunamaqanda (hirudotherapy) lungakhokelela kumgangatho wamahomoni emzimbeni womfazi. Nangona kungakhathaliseki isizathu, ukuqhudana kuqaliswe ukungasebenzi.
Ukuba umzimba uqala ukukhula iinwele kwiindawo eziphosakeleyo (intamo, intamo), ngoko unomxholo okwandisiweyo we-hormone - testosterone emzimbeni.
Ukuba umjikelezo wokuya esikhathini uyaqhekeka, ke isizathu salo sinokungalingani kwamagestagens kunye ne-estrogens kumzimba wesetyhini. La ma hormone amabini aphendule inkqubo efunekayo yokuya esikhathini. Kwisiqingatha sokuqala somjikelezo wokuya esikhathini, i-estrogens isebenza, kwaye kwi-gestagens yesibini.
Iziphumo zeengxaki ze-hormone kubasetyhini
Isifo se-Fibro-cystic esifubeni;
Ukuhlaselwa yintliziyo, isifo;
Uninzi lweengxaki ezingekho kwimvelaphi ye-hormonal zenzeka kubasetyhini emva kweminyaka engama-40, kodwa ngoku amantombazana amantombazana aqala ukuxhatshazwa kule nto. Mhlawumbi isizathu salesi sidima sengqondo kwimpilo yabo. Bobabini amantombazana amancinci kunye nabafazi abaneminyaka emininzi badinga ukunyamekela inguqu kwimimandla yabo, landela umjikelezo wokuya esikhathini, kuba ukungaphumeleli kwe-hormonal kufuneka kuphathwe ngokukhawuleza ukuze kunqande imiphumo embi.
Iingxaki zokungalingani kwe-hormonal
Indlela engalunganga yobomi;
Ukuqeda umva kwangaphambili (kwabasetyhini emva kweminyaka engama-40);
Iipilisi zolawulo lokuzalwa.
Ukwazi njani izinga lama-hormone emzimbeni? Kubalulekile ukwenza uhlalutyo jikelele lwegazi kunye nokuhlalutya kwamahomoni.
Ukuqhaqha kwama-Hormonal kumzimba wesetyhini kubonakala kwiimeko ezinjalo:
Emva kokukhipha isisu;
Ekuqaleni kwexesha lokumisa;
Xa uphethe umntwana;
Ngo ku susela;
Iimpawu zokuphazamiseka kwe-hormone ngexesha lokukhulelwa:
Iingcambu zengumathumbu ezingathuthukiyo;
Ukukhula kweenwele ezinamandla;
Ukungabikho kwimihla ukuya kwiminyaka eyi-16;
Umjikelezo ongaqhelekanga wokuya esikhathini.
Izibonakaliso zemvelaphi ye-hormonal ekuqalekeni kwexesha lokuyeka
Ukuvuvukala kweengqungquthela zamathambo;
Isimo esicacileyo sitshintsha iveki ngaphambi kwenyanga;
Ukuba ufikile ekumiseni umva kwaye oku kubangela ukungaphumeleli kwengqondo, ngoko awukwazi ukuyiphilisa. Abafazi abanjalo baya kukwazi ukukhupha umgangatho wokunyuka komhlonyane, i-celandine, i-lily ye-valley kunye ne-gooseberry goose. Lindela kude kube yinyanga oza kufuneka uphuze le ngxaki. Qiniseka ukuba ubandakanye ekutya kwakho izithelo kunye nemifuno.
Ukuba i-hormonal disorder yaqala emva kokukhipha isisu, kufuneka iphathwe ngokukhawuleza, ngaphandle koko iingxaki zempilo ezinzima zivela.
Emva kokubeleka, emva kwexeshana, xa iBuryanite ye-hormonal iyancipha, yonke into iza kubuyela ngokuqhelekileyo kwaye ilawule iingxaki ezinjalo azidingekile.
Ukuba ufumene i-uterine fibroids, i-polycystosis okanye i-polyp ngaphakathi kwakho, kwaye oku kubangela ukungaphumeleli kwe-hormone, ngoko kufuneka uphuphe ngokukhawuleza, mhlawumbi uya kukhula impilo yakho. Ezi zifo ziyakhula zibe ziimpawu ezimbi.
Ukunyanga kwe-hormonal failure kuyimfuneko kuxhomekeke kwisizathu esabangela ukuba, kufuneka ufumane amayeza aqulethe i-hormone ukuze ulungelelanise izinga le-hormone kumzimba wesetyhini kunye nokukhupha iimpawu zokungalingani kwe-hormonal, ukuthintela ukuphindaphinda nokubuyisela umjikelezo wokuya esikhathini. ugqirha uya kungenelela.
Iimpawu apho ufuna ngokukhawuleza ukuba ubone umfazi wesifo somzimba:
nyanga zonke kunye nexesha eliphantsi kweeveki ezintathu;
kuphuma phakathi kwexesha;
ukulibaziseka kwenyanga engaphezu kweyodwa;
uninzi kakhulu ukuya esikhathini.
Kanye emva kweenyanga ezintandathu ukukhusela, kufuneka utyelele udokotela-gynecologist. Mhlawumbi uya kuphawula ezinye iingxaki ekuqaleni kwinqanaba kwaye unokukwazi ukuzinqanda kalula ngaphandle kokuqala.
Ukuphulukisa imifuno yokusilela kwe-hormonal
Zincede, unokutya kunye namakhambi, athengwa lula kwi-pharmacy. Thenga i-infusion ye-field carnations, ulungele ukuhlangabezana nokungaphumeleli kwe-hormone. Ukusela okanye u-nuzhno amaxesha amane ngosuku kwiiveki ezimbini. Ingxenye yenyanga ukuthatha ikhefu kwaye uphinde uphinde unyango. Esi sityalo sinezityebi kwi-alkaloids, ezikhuthaza i-immune system. Emva kwenkqubo yokonyango, izinga lama-hormone liqhelekile, igazi liyacinywa, kwaye kugcinwe ukutyalwa.
Ngokuqhelekileyo ukulungelelanisa i-hormonal balance will help such a remedy as a lungwort, iqinisa imfutho. Sebenzisa kuphela amaqabunga amancinane kunye namaqabunga, faka ii-purees zabo, isobho kunye namasaladi.
Namela ingondlo yakho. Yizisa iimveliso zakho zokutya kunye nomxholo ophezulu we-phytoestrogens, ezizityalo zendalo zemvelo zama-hormone amabhinqa. Ukongezelela, iimveliso ezinjalo zithwala umhlaza-mhlaza, untifungal kunye ne-anti-inflammatory effect. Ngoko, iimbotyi, amakhowa, ingqolowa kunye namajikijolo zizityebi kwi-estrogens. Kodwa isitya esiluncedo kunabo bonke ibhinqa yi-omelette kunye ne-anyanisi kunye nama-mushroom. Ukuba uthatha esi sidlo kangangeeveki ngesidlo sakusihlwa, ngoko uya kufumana konke okufunekayo ukuphelisa iimpawu zokungaphumeleli kwe-hormone kwaye ukhusele.
Nangona ujikeleza imihla ngemihla njenge "squirrels kwiphepha", uzinyamekele intsapho kunye nomsebenzi, ungalibali wena. Ukuba ungalali, khumbula ukuba inokuchaphazela umzimba wakho, kwaye awunaso ixesha lokufumana emva kosuku olunzima. Ufanele ulale ubuncinane iiyure ezingama-7 ngosuku, kodwa ukuba awukwazi ukulala, akufanele uhluthlise. Zinceda uhlambe kunye nokudibanisa i-lavender, iglasi yobisi kunye nobusi, itiye elifudumeleyo, ixesha lokuzonwabisa okanye umculo omnandi. Awukwazi ukucinga ngeengxaki kwaye usebenze ngaphambi kokuba ulale, ngoko awukwazi ukuphumla, mhlawumbi uya kulala kunye neengcamango zakho kude kube sekuseni, ungavali amehlo akho.
Imithetho yobuthongo obuhle
Uqeqesho lwezonyango zomzimba kunye nokuhlalisa umzimba
Amacandelo okulungisa abantu kwi-couperose ebusweni
Islazi saseScotland: ubungqina, inzuzo, ukuchasene
Iimfihlelo zobuhle bobuhle baseMpumalanga
Iimpawu ezifanelekileyo zeergetgettes
Abantwana emtshatweni: thabatha okanye ungathathi
Indlela yokukhetha iingubo zomntu
Iindlela zokufundisa umntwana ukuba afunde
Iimvumba ezihle kakhulu
Ukutya kwabantwana kwiipulo kunye namapheya
Uthando lwe-horoscope ngo-2017 kuzo zonke iimpawu ze-zodiac
I-sauce emhlophe yamakhowe
Yintoni eyenzeka kuLarisa Dolina: umculi akakwazi ukuqaphela
Izixhobo ezintsha kunye nemveliso yasentwasahlobo
Indlela yokufumanisa ukuphela komhla wokuzalwa